မော်တော်ကား ကို ဘယ်သူ တီထွင်ခဲ့တာလည်း?? | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / မော်တော်ကား ကို ဘယ်သူ တီထွင်ခဲ့တာလည်း??
မော်တော်ကား ကို ဘယ်သူ တီထွင်ခဲ့တာလည်း??
၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာ တီထွင်ခဲ့သည့် လောင်စာဆီသုံးမော်တော်ကားပေါ်ရှိ Gottlieb Daimler(အနောက်)
မော်တော်ကား တီထွင်ခဲ့သူ ဘယ်သူဆိုတာကို တစ်ယောက်တည်းပဲ လက်ညှိုးထိုးပြဖို့ အရမ်းခက်ပါတယ်။ မော်တော်ကားတွေဖြစ်လာစေမယ့် ဖန်တီးမှု ပေါင်း တစ် သောင်း ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး မသိခဲ့တာကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကား ပါ။
သမိုင်းတွေအရတော့ ၁၇၆၉ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nicolas-Joseph Cugnot က ရေနွေ့ငွေ့သုံး ယာဉ် ကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို ယာဉ်ဟာ ရှေ့ဘီး တစ်ဘီး တည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ ခရီးသည် ၄ ယောက်ကို တင်ဆောင်ကာ တစ်နာရီကို ၂.၂၅ မိုင်နှုန်းအထိ အများဆုံးမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ရေနွေးငွေ့သုံး မီးရထားကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ၁၈၈၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ Karl Friedrich Benz နဲ့ Gottlieb Daimler ဆိုသူ ၂ ဦးက လောင်စာဆီ သုံး မော်တော်ကားကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးဟာ အရင်ကလည်း ၁ ယောက် နဲ့ ၁ ယောက် တွေ့ဖူးခြင်းမရှိသလို ဂျာမနီ နိုင်ငံသား ၂ ယောက်ဟာ မတူညီတဲ့ မြို့တွေမှာ နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Benz ကတော့ ၁၈၈၅ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ၃ ဘီး မော်တော်ကား ကို တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Daimler ကတော့ Wilhelm Maybach ဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လောင်စာဆီသုံး စွမ်းအင်မြင့် ဘီးလေးဘီးပါတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို တီထွင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။